Siyaasiyeen Badan oo Ka Soo Jeeda Gobolka Bari Ayaa Ka Soo Horjeystey Siyaasada Col. Cabduulahi Yusuf uu Ku Doonayo Dagaal
Buluugleey, Sunday, September 11, 2005
Siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda gobolka Bari ayaan ku qancin qaabka siyaasada Col. C/llahi Yusuf iyo sida ku dhisan qabqablanimada ee uu u dhaqmayo. Hadda ka hor ayaa talo ka socota wasiirkii kowaad ee dowladii Adan cadde, Mudane Cabdirisaaq Xaaji Xuseen, waxey u soo jeedisey Col. C/llahi Yusuf inuu ka tanaasulo qaabkiisa ku dhisan dagaal oogida, uuna wax ka dhiso nabada oo ah lagama maarmaan.
Sidoo kale waxaa isaga tegey korneylka siyaasyiin kale oo ay isku heyb ahayeen sida Col. Xasan Abshir oo aan marna ku qancin qorshaha siyaasadeed ee Col. C/llahi uu ku howlgelayo. Gaabsiga Col. Xasan Abshir ayaa loo fasirtay inuu khilaaf xagga fekerkaa ka dhex jiro isaga iyo Col. C/llahi.
Cabdirisaaq Xasan Cusmaan “Juriile” oo keliya ayaa hadda ku haray Col. C/llahi Yusuf inuu kala arrimiyo dhinaca siyaasada, isaguna ma dheera wakhtigii uu ka siiban lahaa siyaasadaas aan mirodhalka lahayn. Hadda ka hor Juriile mar uu wareysi siinayey weriyeyaal ka socda wargeyska ka soo baxa Ingriiska ee loo yaqaan Telegraph, wuxuu u sheegay haddii sidaan ay wax ku sii socdaan in meesha lagu kala tegayo bilo yar kadib. Taas waxey dad badan u macneysteen heerka uu gaarsiisan yahay caburka siyaasadeed ee ka jirta qorsha xumada loo agaasimay siyaasada Col. C/llahi Yusuf. Juriile oo siyaasada kaalin weyn ka ciyaari kara ayaa sida la saadaalin karo aysan hadda uu muuqan inuu wakhti dambe isaga sii dhumin doono xarig jiidka u dhexeeya Xamar iyo Jowhar.
Sidaas si la mid ah ayaa Cabdi Cabdulle Siciid (Jinni-boqor) oo ka soo jeeda degmada Qardho ee gobolka Bari, dhowaanna ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka Ingiriiska ayaa ku tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalka C/llaahi Yuusuf Axmed in uu doonayo in uu isku biimeeyo bam inuu isku qarxiyo.
“C/llaahi Yuusuf halkii uu dalku marayey 1991-dii ayuu doonayaa in uu dib noogu celiyo maanta oo la marayo 2005-ta” ayuu yiri Jinni-boqor oo intaasi sii raaciyey in ay dhicisowday dowladda Col. C/llahi, taana uu mas’uuliyadeeda leeyahay isaga.
“Koox NG0-ley ah ayaa geysatay Jowhar C/llaahi Yuusuf, halkii uu nabad ka abaabuli lahaana colaad buu ka shaqeynayaa, shacabkuna ma ogolaan doono keligitaliye qabiileyste ah oo wiilashii uu ka soo uruuriyey Gobolka Bari keenay Jowar si uu ugu isticmaalo dagaal qabiil oo aysan danta Soomaalidu maanta aysan ku jirin” ayuu yiri Jinni-boqor oo arrin qalad ah ku tilmaamay in Col. C/llahi isagoo xeerinaya qabiilnimo in uu hubeeyo ciidamada ka yimid Bari, kuwa kalena uu hubka ka dhigo oo uu tuso kalsooni darro.
“C/llaahi Yuusuf wuxuu doonayaa in uu isbiimeeyo oo uu qarxiyo bamka uu gacanta ku wato, laakiin Insha ALLAAH isaga ayey ku qarxi doonta” ayuu yiri Jinni-boqor oo sheegay in uu u soo jeedinayo shacabka Soomaaliya in ay indhaha ku hayaan duulaanka uu Jowhar ka abaabulayo C/llaahi Yuusuf.
Col. C/llaahi Yuusuf ayaa wareysi uu shalay siiyey BBC-da wuxuu ku sheegay in aysan jirin wax dagaal ah oo uu la damacsan yahay magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in ciidamada lagu uruurinayo Jowhar ay bilow u yihiin ciidamo Qaran oo dalka loo dhisayo.
Dadka intiisa badan ayaa ka walaacsan dhaqanka C/llahi Yusuf oo gacana caalamka ku tuugsanaya, gacanta kalena hub ku uruursanaya. Korneylku wuxuusan garan in sababta loo siin waayey dhaqaale uga yimaada caalamka ay sabab uga dhigeen dhaqankiisa ku dhisan inuu deeqda dibeda u adeegsado abaabul dagaal.